QEMU 5.1 dị ebe a wee rute na ihe dịka mgbanwe 2500 ma ndị a bụ ndị kachasị mkpa | Site na Linux
Mwepụta nke ohuru nke oru ngo - KEMU 5.1, nke agbakwunyere nkwado maka ndị nrụpụta ndị ọzọ, yana nkwado dị mma maka NVMe, mmezi ahụhụ na ndozi na ihe ewepụtara.
Maka ndi na amaghi maka QEMU, ha kwesiri ima na nke a na-enye gị ohere ịme ihe omume agbakọtara maka ikpo okwu ngwaike na a usoro na a kpamkpam dị iche iche ijeDịka ọmụmaatụ, na-agba ọsọ ngwa ARM na PC x86 dakọtara.
Na ọnọdụ Virtualization na QEMU, arụmọrụ nke na-agba ọsọ koodu na sandbox dị nso na obodo usoro n'ihi mmezi nke ntuziaka na CPU na iji Xen hypervisor ma ọ bụ KVM modul.
Ihe oru ngo a bu nke emeputara site na Fabrice Bellard iji kwe ka x86 jikọtara Linux binaries ka o gbaa ọsọ na ulo oru ndi na-abụghị x86
Kemgbe ọtụtụ afọ nke mmepe, nkwado emulation zuru ezu agbakwunyela maka ụlọ ngwaike ngwaike 14, ọnụọgụ nke ngwaọrụ ngwaike ejirila karịa 400.
Main akwụkwọ nke QEMU 5.1
Na njikere nke ụdị ọhụrụ a 5.1, emere ihe karịrị 2500 mgbanwe, nke ndị mmepe 235 so na ya.
N'ime mgbanwe ndị bụ isi na-apụta na ụdị ọhụụ a, anyị nwere ike ịchọpụta na agbakwunyere ya nkwado maka CPU emulation dabere na ụlọ ọrụ AVR, yana tinyekwara nkwado maka mbadamba Arduino Duemilanove (ATmega168), Arduino Mega 2560 (ATmega2560), Arduino Mega (ATmega1280) na Arduino UNO (ATmega328P).
Ọ na-pụta ìhè na agbakwunyere nkwupu na nvdimm maka ACPI ọbịa usoro ARM emulator, Na mgbakwunye, agbakwunyere nkwado emere maka ARMv8.2 TTS2UXN na ARMv8.5 MemTag ndọtị
Agbakwunyere nkwado maka Loongson 3A CPU (R1 na R4) na MIPS ije emulator. Mmezi nke FPU na MSA, yana nkwado maka SiFive E34 na Ibex CPUs na RISC-V ije emulator. Agbakwunyere nkwado maka HiFive1 revB na bọọdụ OpenTitan. Ihe kariri otu CPU ka akwadoro maka igwe Spike.
Maka onye njikwa NVMe na-agbakwunye nkwado maka mpaghara ebe nchekwa na-adịgide adịgide ewepụtara na NVMe 1.4 nkọwapụta.
Na mgbakwunye, agbakwunyela iwu 'bitmap' ọhụrụ na uru qemu-img iji megharịa bitmaps na-adịgide adịgide na faịlụ qcow2.
Qemu-img na etinyekwa LUKS isi njikwa (keyslot) ma na-enye ikike ndị ọzọ maka «eserese» (–malite mbido, –max-ogologo) na iwu ndị «tọghatara» (–bitmaps), gbakwunyere iwu «ezu» iji nyefee ozi na nha nke bitmaps mgbe niile na faịlụ qcow2.
The PowerPC ije emulator ugbu a nwere nkwado maka njehie mgbake na ọbịa usoro iji FWNMI.
Maka s390 ije, nkwado KVM agbakwunyere maka nchekwa echebere echekwa (ọnọdụ mmebi echekwara).
The x86 ije emulator na-ebelata efefe nke virtualizing amaghị Windows ọbịa site na-enye Windows ACPI emulated Device Isiokwu (ACPI WAET). Nkwado emelitere maka mmepe HVF maka macOS.
Onye ngọngọ ngwaọrụ ahụ na-agbakwunye nkwado maka ngwaọrụ nchekwa ihe eji eme ihe na 2 MB nke anụ ahụ na nke ezi uche.
Agbakwunyere ikike iji nyefee okwuntughe na igodo na QEMU maka izo ya ezo site na ntinye kernel Linux site na iji ụdị ihe ọhụrụ "igodo nzuzo".
Ihe zstd compression algorithm na akwado usoro qcow2.
Na Sonorapass-bmc osisi na-akwado.
Virtio maka ndị ọbịa nwere kpochapụwo TCG (obere koodu Generator) nwere ike iji usoro ọrụ vhost, gụnyere viriofsd. Agbakwunyere ndọtị VHOST_USER_PROTOCOL_F_CONFIGURE_MEM_SLOTS na onye ọrụ vhost, na-enye ohere ka edebanye aha karịa oghere 8 RAM.
Agbakwunyere ntunye iji gbanye ike NMI
Ntụziaka Scv na rfscv dị ugbu a na-akwado TCG
Nwere ike ịhọrọ POWER10 ugbua n'ụdị igwe ahụ «pseries»
N’ikpeazu, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị ọhụrụ a nke Qemu, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na akwụkwọ izizi. Njikọ bụ nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » QEMU 5.1 dị ebe a wee bịa na mgbanwe mgbanwe 2500 ma ndị a bụ ihe kachasị mkpa
E debanyere ọgụ na Tor nke gbalịrị ịchịkwa okporo ụzọ ndị ọrụ